Ngizamile uKubuntu 15.04 Beta2 futhi ngikushiyela umbono wami;) | Kusuka kuLinux
Ngizamile uKubuntu 15.04 Beta2 futhi ngikushiyela umbono wami;)
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule iBeta 2 yalokho okuzoba ** Kubuntu 15.04 ** iphume futhi ishiye ukunambitheka okuhle kakhulu emlonyeni wami ngemuva kwemizuzu embalwa yokuhlolwa. Ake sibheke ezinye zezinto ezithokozisayo ongazithola kule Beta.
1 Amandla we-KDE
2 Eminye imininingwane ethokozisayo yeKubuntu 15.04
3 Iziphetho zeKubuntu 15.04
Mhlawumbe ushintsho olubaluleke kakhulu olusiletha ku ** Kubuntu 15.04 ** ukuthi babeka eceleni ukuphepha nokuzinza kwe-KDE 4.X ukuvula izandla zabo ku- ** Plasma 5 **. Angikhumbuli ukuthi iyiphi inguqulo ye-Kubuntu eza ne-KDE 4.0 okokuqala, kepha engingasoze ngakukhohlwa ukuthi bekuyinhlekelele ephelele ngenxa yokungazinzi kwedeskithophu ngaleso sikhathi.
Nge ** Plasma 5 **, yize sihlala sithambekele kokufanayo, angicabangi ukuthi kufana naleso sikhathi. Labo bethu abebelokhu behlola ** iPlasma 5 ** selokhu yasungulwa sibonile ukuthi ikhule kanjani kancane kancane kanti nemininingwane eseyilahlekile incane kakhulu. Mhlawumbe okucasula kakhulu ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza, njengePidgin, azibonisi isithonjana kuthileyi wesistimu. Kepha ngaphandle kokungabaza ezinye izinzuzo nokuthuthuka okuzolethwa yiPlasma 5 ** ku ** Kubuntu 15.04 ** kuzosenza sikhohlwe lezo zinto.
Njengoba sifike esikrinini se- * Login *, siyabona ukunakekelwa kobuhle abathuthukisi be-KDE ababenakho ngenxa yeThimba * elisha eliphethe isithombe nokuklanywa kwale Desktop Environment. Ukubukeka okufanayo esikuthola esikrinini sokukhiya:
Lapho ufinyelela kwiDeskithophu ngicabanga ukuthi into yokuqala esizoyibona ukuthi iyi- "minimalist" kanjani, futhi ngaphandle kokungabaza ibukeka yinhle, yize ithanda imibala. Isibonelo salokhu imenyu yezicelo ze-KDE enesizotha, nenhle futhi e-flat * kakhulu.
Futhi kulabo abathanda izingqikithi ezimnyama ePlasma, khona-ke i- * Breeze * (ingqikithi entsha yeDeskithophu), futhi isinikeza ngenguqulo ethi * Dark *:
Enye imininingwane engiyithandile nge * Live CD * yale Beta ukuthi bafake kuphela izicelo ze-GTK ezidingekayo, kulokhu ** LibreOffice ** kanye ** neMozilla Firefox **. Ngaphezu kwalokho, ifonti ezenzakalelayo ingu ** Oxygen Font **, ifonti eyakhelwe i-KDE ngqo, yize ingangikholisi ngokuphelele nge-system anti-aliasing * yohlelo, futhi ngihlala ngifaka enye. Futhi bangeze ku-KDE Preferences Center, inketho yokubona idatha yethimba lethu:
Ukubuyela ku-** Plasma 5 ** nezinto zayo ezintsha, manje i-applet * ifakiwe kuphaneli ukulawula abadlali bomsindo:
Futhi maqondana no ** Kubuntu 15.04 **, enye i- * applet * ingezwa ukwethula i-KDE Telepathy ewusizo olukhulu:
Ngakolunye uhlangothi, ku- ** Plasma 5 ** bathathe (ngombono wami) isinyathelo sokubuyela emuva ngokufaka izaziso ezintantayo ngendlela yamabhamuza, angalungiseki nakancane. Lezi uma sezinyamalele zingabonwa kuphaneli njengokujwayelekile.
Ngithi yisinyathelo sokubuyela emuva ngoba nge-KDE4, unga * khipha * izaziso kuphaneli bese zinikezwa umumo ofanayo (kubhamuza), kepha sinenketho yokukwenza noma cha. Kunoma ikuphi, zibukeka zizinhle impela.
Eminye imininingwane ethokozisayo yeKubuntu 15.04
Ukuhlola i- * LiveCD * Ngithole eminye imininingwane engithole ukuthi iyathakazelisa, njenge ** Kubuntu ifaka i-GTK Theme entsha ebizwa nge-Orion ** enokuhluka kwayo kwezicelo ze-GTK2 ne-GKT3. Futhi, ingeza isitayela esisha sokuqhafaza se-KDE esibizwa nge- * Fusion *.
Okunye okungidonsele ukunaka ukuthi ngenkathi ngibhala ku ** Kate **, ngikhishwe ngemvume. Lapho ngibuya ngingena ngavula ** uKate ** ngaphinda ngasula ukuthi ngangibhale amanothi amaningi futhi angizange ngiwagcine, kepha ngathola lokhu:
Kwakungangivumeli kuphela ukubona ushintsho lwangaphambi / ngemuva, kepha kwangivumela ukuthi ngikhumbule engangikubhalile, noma ngikhohlwe ngakho. Ucabangani? Uma ngabe lokhu bekuvele kukhona ngaphambili, benginakho nje ibhulakufesi 😉
Njengoba ukwazi ukubona esikrinini-skrini, phakathi kwamanothi ebengikukhomba njengokuthile * okungekuhle kule beta *, ukuthi iLibreOffice idinga uthando oluthe xaxa ngoba ukuhlanganiswa ne-KDE akukubi ngokuphelele, kepha kwimenyu asazi lapho simisa kokunye ukukhetha.
Futhi ukuqeda le ngxenye, kufanele ngivume imininingwane ethile okufanele ibongwe. Okokuqala, ukuthi yize okunye ukusabalalisa okuningi kushintshe indawo yokukhweza yedivayisi ku- * / run / media / user / device / *, uKubuntu ugcina indawo yokukhweza ku- * / media / user / device / *. Elinye iphuzu lokuhlanganisa ukuthi lifaka i-KDE Connect ukuxhumana nesistimu yethu ngocingo lwe-Android.
Iziphetho zeKubuntu 15.04
Ngaphandle kwesikhathi esifushane sokuhlola, ngicabanga ukuthi ** Kubuntu 15.04 ** isilungile futhi isilungele ukwamukela ** iPlasma 5 **. Ngemuva kweKaOS, njengamanje uKubuntu 15.04 kuzoba okunye ukusatshalaliswa * pro Plasma5 * engingakutusa kunoma yimuphi umngani. Okwamanje, ngizolinda inguqulo yokugcina ukuze ngiphinde ngiyivivinye futhi ngiqinisekise ukuthi ngiqinisile yini ngombono wami.
Noma kunjalo, okungcono kakhulu ongakwenza ukuzama ngokwakho, ngakho-ke ngikushiya isixhumanisi sokulanda:
Landa i-Kubuntu 15.04 Beta 2
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ngizamile uKubuntu 15.04 Beta2 futhi ngikushiyela umbono wami;)
Obi-Wan Kenobi kusho
Kuyathakazelisa. Sizobona ngo-Ephreli lapho inguqulo ezinzile iphuma.
I-PS: 15.04 yi-LTS? Bengicabanga ukuthi ngababili, 14.04, 16.04, njll.
Phendula u-Obi-Wan Kenobi
Hhayi mina othandekayo.
The ngababili, kepha ngeXX.04.
Uxolo. Ukuhunyushwa okungalungile kwami.
Ukulungiswa okuncane uma ufuna:
"Yize isikhathi esifushane sokuhlolwa, ngikholelwa ukuthi uKubuntu 15.04 ukulungele futhi ukulungele ukuthola iPlasma 5. Ukuba ukukhishwa kwe-LTS kumele siqinisekise ukuphepha nokuzinza noma ukulungisa okuqinisekisiwe, kepha yona le nguqulo ye-KDE iyasebenziseka ngokuphelele."
Ngokwazi kwami, akuhambelani nokukhishwa kwe-LTS. I-LTS iphuma njalo eminyakeni emi-2, eyamanje iyi-14.04 LTS, bese elandelayo elandelayo izoba yi-16.04 LTS. https://wiki.ubuntu.com/LTS
Manje, maqondana nokuhlolwa: iqiniso ukuthi i-distro iyathakazelisa, ngithanda ukubukeka okutholayo okujwayelekile. Kuzofanele sizame 🙂
Kulungile .. Ngithole umbono wokuthi wonke ama-.04 yi-LTS: D. Ngiyabonga ngokulungiswa, manje ngiyakulungisa.
Ngifuna ukuzama inguqulo yokugcina, lapho ngizama ukuhlola le beta kukhompyutha yami ephathekayo uma ngihambisa amawindi aqala ukunyamalala noma ukucwayiza noma ukuvala, kuyacasula ngempela, ngiyethemba ukuthi eyokugcina iyasebenziseka kimi, ngizozama ngo-Ephreli.
Ilaptop yakho inaliphi ikhadi levidiyo?
I-laptop engivivinya kuyo ukusatshalaliswa ine-AMD Radeon 7310 HD, okwamanje ise-Antergos futhi i-gnome ihamba kahle kahle.
Lokho kwenzeke kimi nge-14.10 ne-plasma 5 ... ngakuxazulula ngokwenza kusebenze umshayeli ozinzile we-AMD. Manje ngo-15.04 angisayidingi.
Ngokwami, ngicabanga ukuthi le nguqulo, noma isese-beta, iyona esebenze kahle kakhulu kwi-laptop yami yamanje (nokuthi ngiyivuselele kusuka ku-14.10). Iyashesha, yinhle, izinzile ... iqiniso ... ngiyayithanda kakhulu. Ngibe nezinkinga ezimbalwa ngezinhlelo zokusebenza ezisuswe uhhafu, kanye ne-kmix ezokwenzeka kuphela ekuqaleni kohlelo. Kukulungisile lokho, konke kuphelele! nokusekelwa kolimi, yilokho engikukhumbule kakhulu ku-14.10 alpha Plasma 5.
Sawubona .. nombuzo wezigidi zamadola Ngingayenza kanjani iCompiz Fusion isebenze?
I-Compiz Fusion ku-KDE? Lokho akudingekile .. 😉
Akudingeki ngoba i-KWin? Akudingeki ngoba iCompiz isivele isiphelelwe yisikhathi? Akudingekile yini ngoba iCompiz ayisizi ukukhiqiza? ...
Imibuzo ngenhloso enhle, ngiyacacisa 🙂.
Ikhekhe le-compiz lihle kakhulu kune-kwin's 🙂
Angiyithandi iPlasma 5, ngiyizamile kuKaos, Manjaro, Kubuntu naku-Arch futhi ayingikholisi. Imithombo ibukeka imbi, ingidla kakhulu kunakuKde4, ishayisa kaningi kakhulu, iqala nge-sddm ihamba kancane njengeKdm futhi ngokujwayelekile ibukeka ifana ne-Kde 4 facelift kunanoma yini enye. Uma i-Kde 4 izinzile, inokwethenjelwa futhi ivikelekile, kungani ungenzi nje ukuphakamisa ubuso ngezimpawu ezintsha, izingqikithi ezintsha nokwenza ngcono izinhlelo ezingathintwanga isikhathi eside njenge-Amarok noma iKonqueror, njll?
I-Plasma 5 kudlula kude nokuphakamisa ubuso .. 😉
Unazo lezo zinkinga ngaphambi kokuvuselelwa kokugcina kwe-plasma 5.2.2, esanda kuxazululwa muva nje, ayisakhiyi futhi isebenza kahle kakhulu. Akusikho ukuphakamisa ubuso ngoba kuyi-qt5, ukusetshenziswa kwenqama kuyefana nedeskithophu yedeskithophu 4 cishe ama-megabyte angama-400. Amarok? kepha uma kungahlangene nhlobo nedeskithophu. o_O
Kulungile ukuthi bazixazulule kodwa kimi ngizolinda kuze kube ihlobo ukulisebenzisa, ngombono wami liseluhlaza kakhulu, lingikhumbuza iGnome 3 ngenkathi iphuma, igcwele izimbungulu.
Into ye-Amarok yashiwo ngoba ezinye izicelo ze-Kde sezilahliwe isikhathi eside, ngicabanga ukuthi bekufanele ngabe zifakwa phambilini ngalezi zicelo kunange-desktop.
Uma i-KDE 4 ipholile kangaka, kungaba umqondo omuhle ukuyeka ukuyisebenzisa, akunjalo? okungenani isikhathi esithile.
Isekelwa isikhathi esingakanani i-KDE 4?
Angizange ngisebenzise i-KDE isikhathi eside kepha iqiniso ukuthi bayinikeze ukuphakamisa ubuso okuhle ezingeni lobuhle. Ngokubona kwami ​​ithole amaphuzu amaningi ngalokhu, bekuthola usuku oluncane.
U-Adolfo Rojas G kusho
Kusukela ngo-2012 lapho ngishintsha kusuka ku-Gnome kanye / noma okuphuma kokunye (isinamoni) ngaya eXfce, ngizizwa ngikhululeke kakhulu ngale ndawo yokugcina (ikakhulukazi ngenguqulo entsha engu-4.12 esivele ihlangabezana cishe nakho konke engikulindele) kepha bakhuluma kakhulu nge-KDE ukuthi isivele inginika njengokufuna ukuyizama nje ukususa ilukuluku lami ...
Phendula u-Adolfo Rojas G
Ukuphela kwento engivimbela ukuthi ngiye eLinux ukukhishwa kwebhethri kuWindows kungihlala cishe amahora amathathu kuLinux ngethemba ngemuva kokulungiswa okuningi ihora nehafu = /
Ugo Yak kusho
Ngibonile ukusebenza okuhle nge-Ubuntu Gnome.
Phendula u-Ugo Yak
phezulu, ukwehluleka okuncane, bengibhekise ku- "Ubuntu MATE" ^^ (angizange ngiyivivinye iGnome).
Kufanele ufake i-TLP ukuze unciphise ukusetshenziswa… .usebenzise i-PPA bese uyifaka ku-jiffy. Akuyona into eyisimangaliso, kepha iyakwazi ukunciphisa ukusetshenziswa phakathi kwe-10 ne-20%.
Ibhethri lami lihlala cishe amahora angu-6.
Yisebenzise ngokulandela lezi zinyathelo:
Ngizizwa sengathi kufanele ngishiye i-gnome ngiye ku-kde, kukhona uhlu oluthile lwezinhlelo eziqukethe ngokuzenzakalela
Angikhathali ukuthi lokhu kungukuqala kokuqaliswa kwe-KDE 5 ngokusemthethweni kubuntu, kepha angazi ukuthi kufanele yini ukushiya i-LTS. Ngizolinda ukubuyekezwa kokuqala kungakapheli inyanga engu-1, ngiyizamile kumshini obonakalayo futhi idla inqama engaphezulu ekuphakameni kwe-Gnome approx 600mb kepha ihamba kahle.
ISIHLOKO: Ngabe kukhona owaziyo ngabadlali bomsindo abanganyanyeki njenge-amarok / clementine ku-KDE? Ngiyayithanda inyama efile kodwa yi-GTK ...
Abadlali bomculo kukhona isigidi. Uma kufanele kube yi-QT, khona-ke bengizoya eTomahawk noma kuYaRock. Banamaphutha abo, kepha bahle kakhulu.
Zama i-Cantata, uqede ngokuphelele futhi usebenzise izinsiza ezingaphansi kakhulu kune-Amarok noma i-Clementine.
futhi kufanele ibe yini iGTK?
Indatshana enhle kakhulu. Umbuzo, kungaba yini izidingo ze-PC?
Lokho kwehluka kakhulu, i-KDE ingasebenza kahle kwi-Netbook ene-1GB ye-RAM ne-Atom njengeprosesa. Ngakho-ke kuya ngehardware onayo.
Isixhumi esibonakalayo se-KDE sihamba kahle kakhulu nge-Nitrux (KDE) + TYPE [: ZERO] icon suite. Kubi kakhulu ukuthi abakhululekile.
Ngizamile i-kde futhi njengezinto ezimbalwa empilweni, ngiyaqiniseka ngalokhu: Angiyithandi nhlobo i-KDE, ngiyi-pro-gnome
njenge kde, nami angiyithandi i-gnome. Ngingu-pro-XFCE. Kepha kuyindaba yokunambitha.
I-elav ngiyithanda uqobo ukwakheka kwePlasma 5. Kodwa-ke, ngenxa yenkinga yokuzinza. Ukuhlala kwami ​​ku-KDE 4 kuhamba isikhathi eside… Noma okungenani kuze kuphume inguqulo ezinzile yePlasma 5.
Okwamanje ngizizwa ngikhululeke kakhulu nge-KDE 4. Ngakho-ke angijahile ukuzama iPlasma 5.
Yize ukuyizama. Ngicabanga ukuthi ngizofaka ikhophi entsha yeLinux Mint nge-KDE kwi-hard drive yesibili. Ngakho-ke uma okuthile kuye kwehluleka kuPlasma 5 bengingalahlekelwa yilutho 🙂
Ngicabanga okufanayo. Ngicabanga ukuthi ngizohlala ne-KDE4 isikhashana, kepha bengingazama iPlasma5 kwenye i-PC. 😉
Ngiwumsebenzisi wegundane, kepha ngithole ikhompyutha eyi-3gb Intel i4, ngabe i-KDE iziphatha kanjani ngalo mshini?
Ngiyabonga ngezimpendulo zakho 🙂
Njengosilika mngani wami
Nginayo kwi-Intel Core i5 futhi isebenza kahle 🙂
Ngizamile kuFedora futhi ngikubonile kuseluhlaza kakhulu:
Ayinazo izithonjana zedeskithophu futhi ayinandlela yokuzibeka (awekho amabhokisi angavamile alawo) Lokhu akukuhle uma ufuna ukunqoba umsebenzisi wendabuko.
Izicelo eziyisisekelo azikho ku-Qt5, njengeDolphin, konqueror, njll. Angiyithandi i-spawn hybrid engakha phakathi kwe-kof 4 ne-5
Isikhungo sokulawula se-KDE sishoda ngamamojula amaningi wokumisa. Ayikwazi ukumisa iphrinta, isibonelo.
Izinhlelo zokusebenza azikwazi ukuncishiselwa kubha yesaziso.
Kusashoda ngezihloko eziningi, noma lokhu kungezinkinga ezimbalwa.
Noma kunjalo, bengisebenzisa i-KDE4 yami yendabuko, futhi uma ufuna ukusetha ngokwakhona, ngiyethemba ukuthi uzixazulule lezi zinkinga kuqala noma okungenani ushiye inketho yokusebenzisa i-KDE4.
Futhi lokhu kungukuhlangenwe nakho kwami ​​kuphela ne-KDE5 kuFedora. Mhlawumbe kwamanye ama-distros kuhlukile, kepha ingxenye enkulu angicabangi ukuthi ilahlekile.
ama-lucas amnyama kusho
Iqiniso elinganikezwa ngokuthuthukiswa kwesoftware yamahhala. Noma maqondana nezindawo zemidwebo…. Ngingakujabulela ukuthi i-gnome ne-kde bacabange kakhulu njengamawindi (uma lokho kungenzeka). Manje unyaka ongu-1 odlule ngisebenzisa i-xfce4. Okokuqala ngiyikhethe ngoba i-pc yami yansuku zonke yokusebenzisa i-pc ingumthombo ophansi, kepha ngibe sengiqhubeka ngiyikhetha ngoba iyipharadigm yedeskithophu ezinzile futhi engaguquki, njengoba yayinjalo kwiWindows XP. Ngiyakholelwa, hhayi kuphela ngokwami, ukuthi abasebenzisi be-GNU / Linux (hhayi bonke, kepha okungenani abaningi) abafuni ukuhambahamba njalo eminyakeni emi-2 bebheka ukuthi ngabe ibha yomsebenzi ibonisa lokho esikudingayo noma izinkinobho ezilapha kusasa kukhona lapho, noma uma amaphaneli wokulawula namuhla eyenye indlela nakusasa enye. I-Plasma (kde 5) ibukeka yinhle, yebo. Kubukeka kukhanga, yebo. Kepha sinamabhola agcwele ukuthi ngenxa ye- «graphic evolution» i-desktop ne-notebbok ezingayidingi, yonke into iyashintsha, futhi iyashintsha, futhi ibonakala ingashintshi futhi ikhula.
Ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi izinhlelo zokusebenza zithole isivinini futhi abashayeli basebenze kangcono futhi kangcono ngokubambisana nejubane le-boot ne-kernel nakho konke lokhu ngezinsizakusebenza ezifanayo njengakuqala. Ziyizimangaliso zesoftware yamahhala .. kodwa ngicela !! ungaziboni uzungeze imvelo yehluzo.
Ngicabanga ukuthi ngikhulumela abaningi. Sanibonani bantu.
Phendula kuma-lucas amnyama
UDJ umkhumbi kusho
I-athikili enhle! Iqiniso elingenhla, libukeka lilihle. Ukungabaza kwami ​​ngezinguqulo zakamuva zomndeni we-Ubuntu, bekukwenzelwe kakhulu ukufuna kakhulu ngehadiwe. Ngicabanga ukuthi lokhu ngeke kuboniswe ngokukhanya ...
Phendula u-Dj Naufrago
Sawubona bengizama lokhu ngenyanga edlule ama-distros amaningana ngiwathanda kakhulu i-Linux Mint 17.1 kuphela ukuthi okuthile kusinamoni engingakuthandi kangako ngaya ku-fedora 21 kepha bekukhona okuthile okungangivumanga ngijabule, manje ngazama ukubuntu 15.04 no Ngiyayithanda i-A desktop enakho konke, i-aesthetics eqaphe kakhulu futhi enembile iDolphin ibonakala iyisimangaliso kimi nginakho konke engikudingayo, okuwukuphela kwento engangisebenzelanga kahle ukuhlanganiswa ne-droopbox kanye ne-kMenu lapho ithi bhala ukusesha Ngibhale iTheminali noma i-konsole futhi akukho lutho olungabheki ngiyethemba bayayilungisa (angazi ukuthi lokhu kwenzeka komunye umuntu), kepha uma kungenjalo ngicabanga ukuthi lapha ngihlala khona i-KDE5 ngashaqeka kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni
Angazi ukuthi benzeni kodwa ngimane ngivuselele ku-Arch futhi isebenza kahle, ideskithophu ngokujwayelekile ibiziphatha ngokushesha, mhlawumbe nge-lag (eyamukelekayo), manje i-lag ihambile ngokuphelele.
Umsebenzi omuhle kakhulu ovela ethimbeni le-KDE.
Ngangivivinya uKubuntu 15.04 ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kanti iqiniso ukuthi ngangilithanda ngempela, ngiyavuma ukuthi angikaze ngibe abalandeli beKDE ngaphezu kwanoma yini ethile ngobuhle bayo, kepha kufanele ngicacise ukuthi i-KDE inezinhlelo ezinhle kakhulu ezinjengeDolphin, I-Okular, i-K3b ukusho ezimbalwa. Yize isebenzisa i-RAM eningi kune-Xubuntu, kwi-PC yami yakudala (i-AMD64x2 ene-4gb ye-RAM kanye nekhadi elihlanganisiwe le-NVIDIA) le nguqulo isebenza kahle kakhulu, umsebenzi omuhle kakhulu
Ngizamile ukufaka okuhlanzekile kwe-15.04, futhi angithathi ikhadi lemidwebo le-Nvidia GS7300. isono ...
Izame uKubuntu 15.04, i-KDE enhle kakhulu, kepha ayikwazanga ukusebenza naleyo desktop, izingozi eziningi kakhulu. Ngigcine ukuyisusa, ngabuyela kuKubuntu 14.10.
kubukeka njengamawindi 8 🙁
Mayelana nemidwebo, ukusebenza nokuqalisa kuhamba kahle, into kuphela engiyibona yehluleka ukuthi umsindo okufanele ngiwuhlele kabusha njalo uma ngingena ohlelweni futhi angazi ukuthi ngabe kukhona ifayili elingaguqulwa ukuze ngingenawo ukwenza lokho njalo lapho ngivula noma ngiqala kabusha i-pc. Imbiza yami ine-2.5Ghz amd athlon dual processor, i-4GB RAM, ikhadi lomsindo elihlanganisiwe nekhadi levidiyo le-1Gb Ati.
Sawubona ngifuna ukuveza umbono wami othobekile, yize ngivumelana kakhulu nombhali wale ndatshana, mina uqobo angizange ngincome i-plasma 5 okwamanje, ngikholelwa ngobuqotho ukuthi kusadingeka ukuxazulula ezinye izinkinga ezingaba isithende sayo se-Achilles ngaphakathi kwezindawo ezihlukile zedesktop.
Ngenze izivivinyo ezithile ku-Kubuntu 15.04, lokhu kufakwe kwi-HP Brand Laptop, Model 420, ene-2GB RAM futhi ngibona okulandelayo:
Isivinini: Yize ilaptop yokuhlola ilinganiselwe ngithole ukuthi uKubuntu usebenza ngokushesha okukhulu maqondana nomfowabo u-Ubuntu 15.04 ofakwe kwikhompyutha efanayo.
Umklamo: Ngaphandle kokungabaza ungomunye wemiklamo emihle kunazo zonke engizibonile, njengoba umbhali ethi kuyabonakala ukuthi izingcweti ze-KDE zazikhathazeke kakhulu ngaleli phuzu, ngoba kuyabonakala ukuthi yideskithophu ehlanzekile futhi enobuciko.
Ukuzenzakalela kweHhovisi: njengenjwayelo i-LibreOffice, akukho ongakusho yize i-libreoffice iswele kancane ukukwazi ukudlula iHhovisi leMicrorobo, ngombono wami kuyindlela engcono kakhulu.
IMenenja yomuntu: akukho engingakusho Xhumana ngicabanga ukuthi kuhamba phambili emkhakheni wayo, futhi ngokuzithoba lolu hlelo luzinikeze umsebenzi wokuba lusizo kune-Outlook noma iThunderbird uqobo….
1.- Kubiza kancane ukuyenza ngezifiso ngoba ngokuzenzakalela iza nengqikimba yeBrize, okubi kakhulu iphuzu yize kungabalulekile kungacasula.
2.- I-Amarok, ngokwami ​​angikaze ngiyithande njengoba ngikuthola kubambeke kakhulu ukuthi uma kufanele sivume ukuthi yiyona ezinze kakhulu ...
3.- irekhodi elihamba phambili kunakho konke ukuthi okungenani uKubuntu 15.04, unenkinga enkulu ngemidwebo, ngoba ukuswayiza kwesikrini, ukuthola kwamanye amabhulogi kuyikhanda labantu baseKubuntu abangakwazanga ukukuxazulula le nkinga okungaba isithende se-Achilles sePlasma 5… ngokusobala iFedora 22 yenze izinguquko ezithile yathola isixazululo esincane sale nkinga….
Ngamafuphi, ngicabanga ukuthi iPlasma 5 izonikeza okuningi okuzokhulunywa ngakho kepha ezinyangeni ezimbalwa noma okungenani lapho Kubuntu 16.04 kuphuma (uma kuphuma), ngoba mhlawumbe kokukodwa kusuka ngokuphelele ku-Ubuntu ngalokho usuku, ngubani owaziyo ...
Ekugcineni sinezindlela eziningi zamahhala esivumela ukuthi singasebenzisi iRobosoft 7 noma iRobosoft 10 engxenyeni yami ngincamela ukulinda kuze kube uKubuntu uzinze nge-plasma 5 ...
Ukucaciswa: umbono wami uvela kumuntu onolwazi lwe-0 ngesayensi yamakhompiyutha, ngingumsebenzisi nje ovamile nongasendle….
Ngingasho nje ukuthi iWindows iyamunca !!!!
ujulius mejia kusho
Ekugcineni othile wenze umsebenzi wesikole futhi kulokho ngiyangeza ukuthi banenkinga yokwazi ukukhishwa komsindo wangaphambili, kulabo bethu abanama-PC wedeskithophu futhi abasebenzisa ihedsethi exhunywe kuma-jacks angaphambili kubalulekile, manje uma sibalungiselela nge-kmix the Iyabona kepha ukumiswa kuyalahleka ngemuva kokuqalisa kabusha ikhompyutha, ukulokoza esibukweni kuvamise ukwenzeka futhi kuyisidina futhi kwenzeka ngaphezu kwanoma yini uma ubuka ibhayisikobho noma ulalela umculo ngamafasitela ambalwa evulekile futhi enye into ukuthi kukhona okwenzekile kimi vele ezikhathini ezi-2 futhi ukuthi isikrini simnyama ngokuphelele futhi njengakwibha yedeskithophu noma umphathi wezemisebenzi kepha akuphumi noma kuvumele noma yini ukwenza lokho kusebenza ukufaka kabusha i-KUBUNTU 14.10 yami endala enamandla futhi ezinzile lapho ngenza khona la mazwana manje. Ikhompyutha yami ine-processor ye-AMD ATHLON 2.5 × 2 Ghz x64 4 Gb RAM DD 1Tb, iRadeon 4550 1GB RAM ihluzo
Phendula ujulio mejia
Njengoba ngishilo cishe imiyalezo engamakhulu ayisihlanu emuva, hahaha, ngilungise inkinga elokozayo ngokufaka umshayeli we-AMD ozinzile wekhadi lami lemidwebo.
U-Eliud Gomez kusho
Sawubona Abangane abavela kwaLinux: Ngifake i-Kubuntu 15.04. Olunye lwezinhlelo zakho zeSmplayer youtube Browser alusebenzeli mina. Ngiyakutshela, ngisebenzisa ithebhu ku-SMplayer, kunketho «funa amavidiyo ku-youtube kuvela ibhokisi lengxoxo elithi: Iphutha: Ayikwazi ukuxhuma kwiseva ye-youtube. Ungangisiza ukuxazulula le nkinga? Ngizoyazisa kakhulu. Ngiyethemba impendulo yakho.
Phendula u-Eliud Gómez